Horudhac: Manchester United vs Aston Villa… (Red Devils oo eegeysa inay caawa wadada guusha dib ugu soo laabato) – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Aston Villa… (Red Devils oo eegeysa inay caawa wadada guusha dib ugu soo laabato)
Haaruun December 1, 2019
(Norwich) 01 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa eegeysa inay wadada guusha dib ugu soo laabto marka ay garoonkeeda Old Trafford ku soo dhoweynayso naadiga Aston Villa kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer kooxdiisa ayaa fadhisa kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta horyaalka iyadoo leh kaliya 17-dhibcood, halka Villa ay fadhiso booska 15-aad iyadoo uruursatay kaliya 14-dhibcood 13-keedii kulan ee ugu horreeyey horyaalka kal ciyaareedkan 2019-20.
Taariikhda: Axad, 01 Dis 2019
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 7:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Manchester United ayaa dib ugu yeeranaysa xiddigaheeda waa weyn kulanka caawa kaddib markii uu macallin Ole 11 isbedel ku sameeyey shaxdiisa kulankii ay guuldarrada kala kulmeen Astana ee tartanka Europa League.
Scott McTominay ayaa dib uga soo laaban kara dhaawac canqowga ah oo uu la maqnaa, halka Paul Pogba uu dib ugu soo laabtay Ingiriiska kaddib markii uu daweyn dhaawac dhanka canqowga ah ku soo qaatay Magaalada Miami, waxaa laga yaabaa inuu ciyaaro kulanka Arbacada ee Spurs.
Daafaca kooxda Aston Villa ee Bjorn Engels ayaa ka soo kabsaday dhaawac misigta ah.
Jota ayaa sii wadaya dhisidda taam ahaanshihiisa kaddib qalliin dhanka sheelada ah oo uu maray.
>- Manchester United ayaa kaliya hal khasaaro la kulantay 24-keedii kulan ee ay garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Aston Villa horyaalka Premier League, waxaana kulankaasi uu ahaa 0-1 looga badiyey bishii December sanadkii 2009-kii, waxa ay Man Utd guuleystay 12 kulan oo ka mid ah 13-kii kulan ee ugu dambeeyey iyadoo lixdii kulan ee ugu dambeeyey si xiriir ah u adkaatay kulamaddii ay ku wajaheen Old Trafford.
>- Kaddib markii ay guuleysteen labo ka mid ah toddobadii kulan ee ugu horreeyay Premier League ee ay la ciyaareen Man Utd (1 Barbaro 4 Guuldarro), Aston Villa ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah 41-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka hortagaan tartammada (1 Guul, 10 Barbaro iyo 30 Guuldarro).
>- Manchester United ayaa ka guuleysatay 34 kulan oo Premier League ah oo ay ka horyimaadeen Aston Villa – kooxda kaliya ee ay ka badiyeen in ka badan tartankan waa Everton oo ay ka adkaadeen 36 kulan.
>- Aston Villa ayaa guuldarro la kulantay 12 ka mid ah 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay meel ka baxsan garoonkeeda ku wajahday kooxaha waa weyn ee lixda sare, waxaana ay guushaasi ka soo gaartay Spurs oo ay uga soo adkaadeen 1-0 bishii April sanadkii 2015-kii, waxaana la galiyey 37 gool 12-kaasi guuldarro, halka ay dhalisay kaliya 7 gool.
Horudhac: Norwich City vs Arsenal… (Macallin Freddie Ljungberg oo kulankiisii ugu horreeyey Galabta hoggaaminaya Gunners)